Microsoft Surface Event မှာ ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မလဲ?
2 Oct 2018 . 3:27 PM
Microsoft ကနေ မကြာခင်မှာ Surface Laptop နဲ့ Surface Pro တွေကို ထုတ်ပြသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု Surface Event ကို “Back to Black” နဲ့ “Moment of Your Time” ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခု Microsoft ရဲ့ Event မှာ ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မလဲဆိုတာကို ဖြော်ပပေးလိုက်ပါတယ်။
Microsoft က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက ပုံမှန် Traditional Laptop ဖြစ်တဲ့ Surface Laptop ကို မိတ်ဆက်ခြ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Microsoft ကနေ မနှစ်က Surface Laptop ကို Intel ရဲ့ 8th Gen Processor တွေနဲ့ RAM ကိုလည်း Entry Model မှာ RAM 8GB ထည့်သွင်းပေးလာမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့အချက်တွေကတော့ ပြောင်းလဲသွားတာမရှိပေမယ့် အနက်ရောင်အသစ်ကို ရရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Microsoft ရဲ့ Surface Pro ဟာ အခုနှစ်မှာ Surface Pro6ကိုတောင် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုထွက်လာမယ့် Surface Pro6ကလည်း Surface Laptop လိုမျိုးပဲ Intel ရဲ့ Latest Processor နဲ့အတူ Black Color အသစ်ကိုပါရရှိလာမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း Surface Laptop လိုမျိုးပဲ ဒီဇိုင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေ အများအပြားရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။
Microsoft ကနေ Surface Studio ကို မိတ်ဆက်ခဲ့တာအခုဆိုရင် ၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Surface Studio ကို မိတ်ဆက်ပြီး အခုအချိန်အထိ အသံတိတ်နေတဲ့အတွက် Microsoft က ဒီ Event မှာ Surface Studio2ကို မိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်။
Microsoft ရဲ့ ဒီနှစ်အတွက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Major Update ဖြစ်လာတဲ့ Windows 10 October 2018 Update ကိုလည်း အခု Event မှာ Highlight အနေနဲ့ ဖော်ပြသွားမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Microsoft ရဲ့ နောက်ထွက်လာမယ့် Windows Update အကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားသွားဖို့ များနေပါတယ်။
Microsoft ကနေ မကွာခငျမှာ Surface Laptop နဲ့ Surface Pro တှကေို ထုတျပွသှားတော့မှာဖွဈပါတယျ။ အခု Surface Event ကို “Back to Black” နဲ့ “Moment of Your Time” ခေါငျးစဉျတှနေဲ့ မိတျဆကျသှားမှာဖွဈတဲ့အတှကျ အခု Microsoft ရဲ့ Event မှာ ဘာတှမြှေျောလငျ့နိုငျမလဲဆိုတာကို ဖွေျာပပေးလိုကျပါတယျ။
Microsoft က ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတုနျးက ပုံမှနျ Traditional Laptop ဖွဈတဲ့ Surface Laptop ကို မိတျဆကျခွ့တာဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ Microsoft ကနေ မနှဈက Surface Laptop ကို Intel ရဲ့ 8th Gen Processor တှနေဲ့ RAM ကိုလညျး Entry Model မှာ RAM 8GB ထညျ့သှငျးပေးလာမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနျြတဲ့အခကျြတှကေတော့ ပွောငျးလဲသှားတာမရှိပမေယျ့ အနကျရောငျအသဈကို ရရှိလာမှာဖွဈတယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
Microsoft ရဲ့ Surface Pro ဟာ အခုနှဈမှာ Surface Pro6ကိုတောငျ ရောကျရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။ အခုထှကျလာမယျ့ Surface Pro6ကလညျး Surface Laptop လိုမြိုးပဲ Intel ရဲ့ Latest Processor နဲ့အတူ Black Color အသဈကိုပါရရှိလာမှာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး Surface Laptop လိုမြိုးပဲ ဒီဇိုငျးပိုငျးပွောငျးလဲမှုတှေ အမြားအပွားရှိလာမှာမဟုတျဘူးလို့ ယူဆရပါတယျ။
Microsoft ကနေ Surface Studio ကို မိတျဆကျခဲ့တာအခုဆိုရငျ ၂ နှဈရှိပွီဖွဈပါတယျ။ ပထမဆုံး Surface Studio ကို မိတျဆကျပွီး အခုအခြိနျအထိ အသံတိတျနတေဲ့အတှကျ Microsoft က ဒီ Event မှာ Surface Studio2ကို မိတျဆကျလာနိုငျပါတယျ။
Microsoft ရဲ့ ဒီနှဈအတှကျ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ Major Update ဖွဈလာတဲ့ Windows 10 October 2018 Update ကိုလညျး အခု Event မှာ Highlight အနနေဲ့ ဖျောပွသှားမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Microsoft ရဲ့ နောကျထှကျလာမယျ့ Windows Update အကွောငျးကိုလညျး ပွောကွားသှားဖို့ မြားနပေါတယျ။